Taombaovao Malagasy Siantifika ?
2013-03-17 @ 22:49 in Kolontsaina
Ninia tsy nitabataba loatra aho tamin'ity raharaha iray ity. Sanatria tsy fitiavana manokana ny fomba malagasy na fanaovana tsinontsinona ny fitadiavana izay mampiavaka sy mahaizy ny Malagasy fa indraindray misy ihany ny zavatra mila fanazavana sy itadiavam-baliny ny lohahevitra iray. Ny tena dia mpankafy ny kolontsaina koa na dia tsy nobeazina tamin'ny fombafomba malagasy loatra noho ny fiainana an-drenivohitra aza dia mianatra ny mahafantatra sy maka tsoa-kevitra amin'izay mendrika asandratra. Dia tonga ity Taombaovao Malagasy izay mampiady hevitra fatratra sy mampifanolana vondron'olona samy mpanandratra ny maha-Malagasy.
Tsy mifanaraka amin'izay tokony ho taombao iraisana sady iavahana. Valalanina ny mpanao gazety ary fanina ny sarambambem-bahoaka, hany ka lasa tsy miraharaha ilay kolontsaina. Ny antony hanoratako kosa, ahiako hisy tohiny ny raharaha, dia ho an'ireo izay liana ka te-hahafantatra bebe kokoa. Na ny tena aza dia nandany andro maromaro nitadiavana tahirin-kevitra (mbola an-tserasera avokoa) sy namakivakiana ny hevitr'ireo olona manodidina ity resaka ity. Mety ho lava ny resaka fa ny tsy maintsy idirako voalohany dia ny fihamboana fa misy ny taombaovao ara-tsiantifika izay mety hampihomehy ihany rehefa mieritreritra ilay izy elaela ianao. Tsoa-kevitra tamin'izay hitako niainga tamin'ny famakiana ireo tahirin-kevitra (lahatahiry) no atolotro etoana.
Fampidirana vetivety: misy karazany roa amin'ny ankapobeny ireo mpitana ny taombaovao Malagasy, ka ny mampifanolana indrindra ireo antokon'olona ireo dia ny daty hanamarihana izany. Ny antoko voalohany dia ireo mankalaza ny fety eo anelanelan'ny volana marsa-avrily izay ny fikambanana Trano Kolotoraly Malagasy sy ny fikambanana Mamelomaso. Ny antoko faharoa kosa dia ireo mankalaza ny fety mifanandrify amin'ny fiafaran'ny volana Ramadany izay ny Zana-dRanavalona no tena fanta-daza amin'izany. Heveriko fa avy any amin'ny loharano nanatanterahana voalohany ny fotoana no mahatonga ny fisarahan-kevitra. Ny an'ireo antokon'olona voalohany ny asiako resaka vetivety etoana.
Fandresen-dahatra miavaka sy entina tsy ahafahan'ny mpifandresy lahatra amin'ireo mpankalaza ny taombaovao mandritra ny tsinambolan'ny alahamadin'ny marsa-aprily mamaly azy intsony ny filazana fa azo porofoina ara-tsiantifika ny taombaovao fikiriny. Hoy ny filazana hoe : « Andro hifanitsian’ny volana sy ny masoandro amin’ny antokon-kintana Alahamady raha jerena avy ety an-tany (eto Madagasikara) ny taombaovao malagasy ». Vao mahare izany ny mpiady hevitra aminy dia tsy mahateny satria angaha ny azy ny heveriny azo porofoina ara-tsiantifika ity resaka taombaovao ity? Fa angaha r'itony porofoina amin'ny fomba siantifika itony fety itony? Ny ao an-tsaiko dia tsy azo porofoina izany zavatra izany satria resaka ifanekena no hanaovana na hametrahana ny daty fa tsy nisy fanaporofoana ara-tsiantifika izany. Na izany aza dia aleo apetraka araka ny fomba fisainany ny resaka.
Lasa aloha ny tena nanontany an'i Google hoe misy ifandraisany ve ny taombaovao sy ny astronomia na ny taombaovao sy ny siansa fa izay nojereko rehetra tsy misy mampifandray ireo voambolana niara-nalahatra ireo. Tena miavaka manokana ve izany ny Malagasy raha afaka manaporofo fa siantifika no nisafidianany ilay na ireo andro hanaovana ny taombaovao no tsy misy ifandraisany izy ireo amin'ny fitadiavana atao? Misy resaka tsy milamina ao ambadimbadika ao an! fa lasa hatrany nanao ny fitadiavana, farany tonga teo amin'ity hoe "Zôdiaka" na raha atao teny malagasy mahazatra kokoa dia hoe "ireo anaram-bintana" nalahatra araka ireo antokon-kintana eny amin'ny lanitra jerena avy ety an-tany ka andalovan'ny masoandro. Fa nihomehy irery amin'izay aho rehefa nahavaky azy nanao hoe izao izany no siantifika aminy koa. Fa ahoana ny voalaza?
Tena tsorina dia tsorina ny resaka mora hahazoana azy. Misy karazany roa ny zodiaka dia ny zodiaka teorika ( zodiaque tropical) sy ny zodiaka ara-boajanahary (zodiaque sidéral). Ny zodiaka teorika dia ny fampizarazarana ho 12 ny faribolana iray ka samy mahazo zoro 30° tsirairay avy ny antokon-kintana nakana ny anaram-bintana (noraisina ho karazana anaram-bolana teo amin'ny Malagasy teto Imerina). Ny toera-piaingan'ny fotoana raisina na hoe toera-pifanandrifiana niaingana dia eo amin'ny teboky ny lohataona (point vernal ou équinoxe du printemps ho an'ny ila-bolantany avaratra) izay heverina ho teboka iray samy niaingan'ny zodiaka teorika sy ny zodiaka ara-boajanahary.
Ny zodiaka ara-boajanahary kosa dia ny toerana tena marina misy ireo antokon-kintana raha oharina amin'ny teboky ny lohataona. Noho ny fisian'ny fikisahan'ny miraalina (équinoxe) izay miteraka fifindra-toerana eo anivon'ny habakabaka dia misy fifampisintahana tsikelikely 1° isaky ny 72 taona eo amin'ny zodiaka roa tonta na fiovan'ny fotoana andalovan'ny masoandro eo amin'ny antokon-kintana voafaritra na tenenina amin'ny voambola hafa hoe fiovana anaram-bintana isaky ny 2150 taona na mahavita fihodinana feno iray isaky ny 25800 taona. Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 29° avy eo amin'ny teboky ny lohataona no misy ny fanombohan'ny zodiaka ara-boajanahary raha tsy etsehina eo amin'ny fanombohan'ny zodiaka teorika kosa izany teboky ny lohataona izany. Izany hoe andro na vanim-potoana hafa mihitsy amin'ny fotoana teorika ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana jerena avy ety an-tany ny fifanandrifian'ny masoandro sy ilay antokon-kintana voalaza ara-boajanahary. Tsy haiko intsony raha mbola azon'ny mpamaky izay tiako lazaina na tsia fa na izaho aza mbola sahirana manazava azy amin'ny teny Malagasy.
Efa nisy nahavita tabilao moa izany resaka izany hahatsotra azy fa dia tsy maintsy ataoko fanazavana an-tsoratra hatrany noho ny fahasarotana sy ny fotoana lany amin'ny fananganana tabilao amin'ny tranonkala.
Raha ara-teorika dia hoe ny 21 marsa- 19 avrily no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Alahamady (Al-h' amal) na Bélier dia ny 18 avrily - 13 mey kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 20 avrily - 21 mey no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Adaoro (Ath-thaûr) Taureau dia ny 13 mey - 21 jona kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 21 mey - 21 jona no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Adizaozo (Al-dzaûza) na Gémeaux dia ny 21 jona - 20 jolay kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 22 jona - 22 jolay no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Asorotany (As-sarat ân) na Cancer dia ny 20 jolay - 10 aogositra kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 23 jolay - 23 aogositra no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Alahasaty ( Al-asad) na Lion dia ny 10 aogositra - 16 septambra kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 24 aogositra - 22 septambra no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Asombola (As-sumbula) na Vierge dia ny 16 septambra - 30 oktobra kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 23 septambra - 23 oltobra no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Adimizana (Al-mizan) na Balance dia ny 30 oktobra - 20 novambra kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 24 oktobra - 22 novambra no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Alakarabo (Al-aqrab) Scorpion dia ny 20 novambra - 29 novambra kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Eto misy antokon-kintana antsoina hoe Serpentaire tsy napetraka ho ao anatin'ny anaram-bintana saingy ny fifanandrifiana tazana avy ety an-tany ataon'ny masoandro amin'izany antokon-kintana izany dia ny 29 novambra - 18 desambra
Raha ara-teorika dia hoe ny 23 novambra - 21 desambra no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Alakaosy (Al-qaûs) na Sagittaire dia ny 18 desambra - 20 janoary kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 22 desambra - 19 janoary no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Adijady (Al-djadi) na Capricorne dia ny 20 janoary - 16 febroary kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 20 janoary - 19 febroary no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Adalo (Ad-dalû) na Verseau dia ny 16 febroary - 11 marsa kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Raha ara-teorika dia hoe ny 20 febroary - 20 marsa no ifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Alohotsy (Al-h'ût) na Poissons dia ny 11 marsa - 18 avrily kosa no fandalovana ara-boanajahary ataon'ny masoandro amin'io antokon-kintana io eny an'habakabaka.
Koa eto am-pamaranana vetivety ary dia te-hanontany aho hoe aiza ho aiza ara-tsiantifika tokoa no fifanandrifian'ny masoandro amin'ny antokon-kintana Alahamady? Ny lazainy ho 21 marsa - 19 avrily ara-teorika sa ny 18 avrily - 13 mey ara-boajanahary na tena izy eny an'habakabaka eny amin'izao fotoana izao raha tazanina avy ety an-tany ?
Jentilisa 18 marsa 2013